Bogagga: Naqshadeynta Isdhexgalka, Naqshadeynta Wajahadda Isticmaalaha, Naqshadeynta Khibradda Isticmaalaha | Martech Zone
Waxaan fiirinayay runtii mashruuc qabow oo furan oo caawa la yiraahdo xayeysiis halkaas oo aad isku toli karto HTML iyo bogagga CSS isla qibrad isdaba-joog ah oo ka shaqeysa barxadda. Waxay ka shaqeeyaan qalabka mobilada iyo kaniiniyada (xitaa taageerida shaashada taabashada iyo shaashad buuxda). Iyo bogagga internetka ayaa lagu kaydiyaa internetka laakiin sidoo kale waxaa lagu soo bandhigi karaa khadka tooska ah! Waxay sidoo kale la shaqeeyaan DropBox waana lala wadaagi karaa sidaan hoosta ku sameynayo!
Kani waa slide fiican oo kooban Jamie Cavanaugh taas oo sharraxaysa farqiga u dhexeeya Naqshadeynta Isdhexgalka (IxD), Isticmaalka Isdhexgalka Isticmaalaha (UI) iyo Naqshadeynta Khibradda Isticmaalaha (UX). Isbarbardhiga badarka, baaquli iyo qaaddo ka Ed Lea waa xariifnimo.
Tags: Naqshadeynta isdhexgalkaixdxayeysiisuiNaqshadeynta Khibradda Isticmaalahanaqshadeynta adeegsadahaux
Oktoobar 4, 2013 at 1:15 PM
Qoraal gaar ah, Mahadsanid